6 nhau dzaJune muzvinyorwa, dema, vechidiki, inonakidza kana nhoroondo | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Biography, Fantasy, Mabhuku, Novela, Nhema nhema
June. Nzvimbo yekutsikisa inoenderera ichifamba uye ichioneka nhau zvinotarisirwa mumusika. Mugore ra zana remakore rekufa kwaBenito Pérez Galdós, haikwanise kupotsa imwe biography saYolanda Arencibia's. Asi iyo zvakare inodzosera yakanakisa mutengesi senge Joël dicker, zita renhoroondo senge Musoro wemombe, UN Referrer of the fungidziro yevechidiki, kubudirira kukuru kwe Noir korea kana inzwi re Western novel chii chine Basilisk.
Asi june zvichavawo yakatsaurirwa kune nhoroondo yenhoroondo nezvimwe kubvunzana kune vanyori veiyi genre, sezvo ini ndatopedza May naTeo Palacios. Iko kunakidzwa chaiko kuva nako Pedro Santamaria, Leon Arsenal o Louis clog, pakati pevamwe.
1 Galdos. A biography - Yolanda Arencibia
3 Musoro wemombe - Antonio Pérez Henares
4 Songbird uye Nyoka Ballad - Suzanne Collins
5 Mwana wega - Mi Ae Seo
6 Chirahwe cheKamuri 622 - Joël Dicker
Galdos. Hupenyu - Yolanda Arencibia
Yolanda Arencibia ari Veteran Canarian purofesa wezvinyorwa zveSpanish uyo akahwina muna Ndira apfuura Comillas Mubairo weNhoroondo, Biology uye Ndangariro, kubva kuTusquets Editores, kune iyi biography yemurume wake ane mukurumbira. Iye zvakare ndiye nyanzvi yemazuva ano pabasa rake.
Mariri rinokosha iro rakazara basa remunyori uye panguva imwecheteyo anozvimisikidza munhoroondo nemagariro mamiriro aairarama. Kune izvi anoshandisa akanyanya akasiyana magwaro eGaldós akadai ake enganonyorwa, mabasa anoshamisa uye memoir Inokosha mune iri gore reGaldosian.
Jon Bilbao ndiye munyori wemazita akati wandei senge Kunge nyaya inotyisa o Pasi pesimba re comet, uye akahwinawo mibairo yavo.
Zvino chipa izvi bhuku renhau izvo zvinoumba kumashure a Western novel. Ino nyeredzi a Engineer kuti, panguva yekugara muCalifornia, anosangana nevanhu vaviri vanozoshandura hupenyu hwake. Yokutanga ndeye Catherine, musikana wechiGerman anopedzisira ave mudzimai wake. Uye wechipiri anga afa kwezana ramakore. Zviri John dunbar, tateguru wemuridzi wepurazi raari kugara, a ane chisimba uye anotyisa hunhu, nekudaro zita remadunhurirwa rekuti Basilisk, iro rinomiririra iyo yechinyakare yeWest West essence.
Musoro wemombe - Antonio Pérez Henares
Pérez Henares ikozvino anotiunzira iyo mufananidzo wemukundi zvimwe asinganyanyo kuzivikanwa kana kuratidzwa kupfuura vamwe. Kamwe chete, dzosera esa nhema nhema iyo inodhonza nguva ye Kukunda kweSpain kweAmerica nekuvaraidzwa uku hupenyu hwaCabeza de Vaca, murume aiziva kunzwisisa uye kudzivirira nzira ye hupenyu hwemuno muzana ramakore regumi nenhanhatu.
Songbird uye Nyoka Ballad - Suzanne Collins
Zvinouya prequel yeimwe yeakabudirira sagas yevechidiki fantasy zvinyorwa: izvo zve Nzara Mitambo.
Nyeredzi Coriolanus Chando, gumi nemasere, uyo mangwanani ekukohwa achatanga iyo Gumi yeNzara Mitambo, anogadzirira mukana wakasarudzika: kuwana mbiri semurairidzi weMitambo. Zano remhuri yeChando zvinoenderanawo naye. Asi zvese zvinopesana naye.
Mwanasikana chete - Yangu Ae Seo
"Zvinoshamisa", «MaKorea akadzosera iyo thriller»,« Ivo vatora chapupu chevaNordics ... ». Iwo mamwe emamwe ma Akazvitsaurira uye echinyakare epithets nemitsara yekujairika kushambadzira zvevakadzi. Uye zvino zvava kumaKorea. Pasina mubvunzo, vane quota yegore mu cinema uye mumimhanzi hapana chakafanana nemapoka uye mabhendi akagadzirirwa kudyiwa kukuru uye kubudirira pakati pevechidiki. Ndakadaro ndichiridza paza musika wekutsikisa zvakare.
Nekudaro iri zita rinoda kumira pachena uye ndiro kutanga yakasainwa nemunyori uye munyori Mi Ae Seo. Iyo nyeredzi forensic psychologist Seon-gyeong mune hupenyu hwevanhu vaviri vanoonekwa: a mhondi ane mukurumbira pasi rose Lee Byeong-do, uyo anga aramba akanyarara kusvika panguva iyoyo, uye mwanasikana makore gumi nerimwe kubva kumuchato wapfuura yemurume wake.
Seon-gyeong anotarisira musikana, amai vavo vakafa vefomu nasekuru nasekuru vaaigara navo vakafawo mumoto usingatsanangurike. Asi musikana anoita seasingakuvadzi anongotaura uye anoita zvinoshamisa. Uye neimwe nzira Seon-gyeong anotenda izvozvo Maitiro ehuremu mhondi nemusikana vane zvinhu zvakafanana, asi ndedzipi?
Chirahwe chekamuri 622 - Joël Dicker
Uye kwaari 3 yeJune tine zvakare Joël Dicker, uyo anopa zita idzva nechinangwa chekuverenga zhizha rinotevera. Inoisa mukati Switzerland, nyika yokumusha kwake, inova isiri iyo nyika inoyevedza zvinoita uye vanotengesa kwatiri.
Dzoka na Zvimwe thriller, Kudzokorora maitiro ane kumashure kwevanyori uye maitiro ekugadzira, kwaanotiudza kuwanikwa kwe chitunha en uriri hwe imba 622 kubva kuPalace de Verbier, hotera yepamusoro muSwiss Alps. Kuferefetwa kwemapurisa kusingapere uye, nekufamba kwenguva, izvo zvakaitika zvichakanganikwa.
Iye protagonist ndiye munyori iye pachake uyo, makore gare gare, anosvika pahotera imwechete kuti akunde kurambana kwekunzwa. Y inopedzisira yaongorora mhosva yekare nerubatsiro rwe Scarlett, muenzi akanaka uye anoda kuverengera mukamuri rinotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » 6 nhau dzaJune muzvinyorwa, dema, vechidiki, inonakidza kana nhoroondo
Chii chinonzi nhetembo yekuona?